प्रशासनिक सहायकका कार्यहरू के हुन्? | गठन र अध्ययन
प्रशासकीय सहायकको कर्तव्य
माइट निक्यूसा | | सामान्य प्रशासन, स्थानीय व्यवस्थापन, विपक्षहरू, प्रशासन द्वारा
के तपाईंलाई थाहा छ? प्रशासकीय कार्यहरू? यदि तपाईं हालको प्रशासनिक सहायक प्रतियोगिताहरू लिने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले यी कार्यहरू के हुन सक्दछ भनेर जान्नुपर्दछ जुन तपाईं परीक्षामा पास गर्नुभयो भने त्यस्तै व्यायाम गर्नुपर्नेछ।
यो काम, र यसैले, तिनीहरूको कार्यहरू प्रशासनिक टेक्निशियनको साथ भ्रमित हुनु हुँदैन। जे होस् दुबै शब्द "प्रशासनिक" बोक्दछन् ती दुई भिन्न प्रकारका कामका हुन्।
1 प्रशासनिक सहायक के हो?
2 प्रशासनिक सहायक हुन के लिन्छ?
3 प्रशासनिक र प्रशासकीय सहायक बीचमा के भिन्नता छ
3.1 प्रशासनिक सहायक कार्यहरु
3.2 प्रशासकीय कर्तव्यहरू
4 प्रशासनिक सहायक कोर्स कति लामो हुन्छ?
5 प्रशासनिक सहायक प्रतियोगिताको लागि कति विषयहरू अध्ययन गर्नुपर्दछ
प्रशासनिक सहायक के हो?
प्रशासनिक सहायक त्यो हो व्यक्ति हामी प्राय: निजी वा सार्वजनिक केन्द्रहरूमा भेट्छौं र जसको मुख्य कार्यहरू कार्यालय कामसँग सम्बन्धित छन्। तर प्रशासनिकको काम के हो भनेर ठ्याक्कै जान्नको लागि, कुन कार्यहरू र भूमिकाले प्रशासनिक सहायकहरू प्रदर्शन गर्नुपर्दछ, सार्वजनिक केन्द्रहरू र निजी केन्द्रहरू, तल पढ्न।
प्रशासनिक सहायक हुन के लिन्छ?
प्रशासकीय सहायकहरू द्वारा गरिनु पर्ने सबै कार्यहरूबारे जान्दै, यो तपाईंलाई सबै कुरा जान्नुपर्दछ र हुनुपर्दछ:
स्पष्ट रूपमा पढ्न र लेख्न जान्नुहोस् आधारभूत क्यालकुलस को धारणा.
को क्षमता संचार.
ICT ज्ञान, शब्द संसाधन र / वा किबोर्ड नियन्त्रण।
राम्रो संगठित हुनुहोस्, व्यावहारिक हुन र आफ्नो काम मा सावधान।
जान्नुहोस् र इच्छुक हुनुहोस् टोलीको रूपमा काम गर्नुहोस्.
सामान्य कार्यालय उपकरणहरू कसरी ह्यान्डल गर्ने जान्नुहोस्, जस्तै फोटोकपीहरू।
छ सुरुचिपूर्ण र औपचारिक रूप यदि तिनीहरूले स्वागत कार्यहरू गर्दछन्।
कसरी देखाउने जान्नुहोस् व्यावसायिक, नम्र र अनुकूल मनोवृत्ति।
पहल गर्नुहोस् सोधेका कार्यहरू पूरा गर्न।
र तपाइँ, तपाइँ प्रशासनिक सहायकलाई सोधेको सबै कुराको पालना गर्नुहुन्छ? यो तपाइँलाई के स्पष्ट भयो प्रशासकीय कार्यहरू तपाइँले के गर्नु पर्ने हो यदि तपाइँ काम पाउनुभयो भने? यदि तपाईं यो काम गर्न चाहानुहुन्छ भने, मा SAS विपक्षहरू Andalusian स्वास्थ्य सेवा को तपाईं संग यो प्राप्त गर्न को लागी एक महान अवसर छ।
प्रशासनिक र प्रशासकीय सहायक बीचमा के भिन्नता छ
एक विपक्षको लागि तयारी गर्न धेरै चुनौतिहरु द्वारा सामना आज चुनौती छ। धेरै उम्मेद्वारको चासो जगाउने प्रतियोगिताहरू मध्ये ती प्रशासक र प्रशासनिक सहायकका लागि नयाँ पदका लागि कल गर्नेहरू हुन्। जे होस् अवधारणाहरु यति समान देखिन्छन्, तर यो स्पष्ट हुनु पर्छ कि ती पर्यायवाची छैनन्। अब हामी स्पष्ट पार्नेछौं माथि उल्लेखित विपक्षको सन्दर्भमा दुई प्रोफाइलहरू बीच के भिन्नताहरू छन्?.
परीक्षण पहुँचको आवश्यकता प्रत्येक केसमा फरक हुन्छ। शैक्षिक दृष्टिकोणबाट, प्रशासकीय सहायकको पुनःसुरु ESO को शीर्षक देखाउनु पर्छ वा यो बराबर। प्रशासनिकले आफ्नो पक्षका लागि यो प्रमाणित गर्न आवश्यक छ कि उसले स्नातक पूरा गरेको छ वा त्यो शीर्षक जुन यस शैक्षिक तह बराबर छ। यो स्पष्ट गर्नुपर्दछ कि पेशेवरहरूसँग बढी उन्नत प्रशिक्षण हुन सक्छ, तर यो परीक्षणको लागि योग्य हुन प्रत्येक केसमा आवश्यक तयारी हो।
जस्तो हामीले टिप्पणी गरेका थियौं, प्रशासकहरूले अझ बढी प्रशिक्षण लिनु पर्छ। र, त्यसकारण, ती कार्यहरू पनि गर्छन् जुन अधिक जटिल छ। दुबै प्रोफाइलहरूले फर्मको दैनिक दिनको दौडमा धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दछन्, तर प्रत्येक कामको स्थिति फरक हुन्छ। प्रशासनिक सहायक यस विषयमा सम्बन्धमा अधिक प्राविधिक कार्यहरू गर्दछ.
प्रशासनिक, उनको भाग को लागी, अधिक जिम्मेवारी को स्थिति मा कब्जा र प्रशासनिक व्यवस्थापन कार्यहरु गर्दछ। र फलस्वरूप, अधिक जिम्मेवारी को स्थिति को प्रदर्शन पनि मासिक तलब मा मानिन्छ कि अधिक छ प्रशासकीय सहायकको तलब भन्दा
तल हामी यसलाई स्पष्ट बनाउन को लागी प्रत्येक एक को कार्यहरु को विवरण:
प्रशासनिक सहायक कार्यहरु
यो पेशेवर फोन कल को जवाफ
संग्रह कार्यहरु प्रदर्शन गर्नुहोस्
सावधान हिज्जे संग पाठ टाइप गर्नुहोस्
दिन को एजेन्डा को ख्याल राख्नुहोस्
समय सीमा पूरा गर्न सहकर्मीहरु संग एक टीम को रूप मा काम गर्नुहोस्
यो कामदार एक व्यावहारिक उद्देश्य को लागी बिभिन्न कम्प्यूटर प्रोग्रामहरु को उपयोग गर्दछ। संचार कार्यहरु को विकास: न केवल फोन कल को जवाफ तर ईमेल।
तल तपाईंसँग सूची छ एक प्रशासनिक को मुख्य कार्यहरु:
फोन कलहरू लिनुहोस्।
भ्रमणहरूमा भाग लिनुहोस्।
प्राथमिक गणना गर्नुहोस्।
डिपार्टमेन्ट सम्बन्धित सबैमा रिपोर्ट गर्नुहोस् जुन यो निर्भर गर्दछ
फाईलहरूको प्रक्रियामा अप टु डेट रहनुहोस्।
एजेन्डा अद्यावधिक राख्नुहोस्, दुबै टेलिफोन र ठेगानाहरू, र बैठकहरू।
सार्वजनिक प्रशासनको विभागको ज्ञान छ जुन अनुभागमा यो निर्भर गर्दछ सबैभन्दा सम्बन्धित छ।
साथै, क्याल्कुलेटरबाट फोटोकपीयरमा, व्यक्तिगत कम्प्युटरहरू र उनीहरूले प्रयोग गरेको कम्प्युटर प्रोग्रामहरू मार्फत अफिस मेशिनरीको ह्यान्डलिंगको ज्ञान राख्नुहोस्।
यो सम्भव छ कि एक दिन प्रतिदिन को आधार मा त्यहाँ अझ धेरै प्रकार्यहरु छन् कि प्रशासनिक रूपमा प्रदर्शन गर्न को लागी हुनेछ, तथापि, यी सबैभन्दा प्रतिनिधि हुन्।
प्रशासनिक सहायक कोर्स कति लामो हुन्छ?
प्रशासनिक सहायक एक पेशेवर हो जो एक टीम को रूप मा काम गर्दछ। र, त्यसकारण, यो कार्यालय मा निर्धारित उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न शामिल छ। अफिसमा सम्पन्न सबै कार्यहरू सान्दर्भिक हुन्छन्, व्यवहार गर्न सजिलो देखिन्छ। फोटोकपी गर्ने, उदाहरणका लागि, एक आवश्यक काम हो। यो व्यावसायिक प्रोफाइल यस कार्यको जिम्मामा छ।
तालिमले ती पेशागतहरूलाई तयारी प्रदान गर्दछ जुन यस क्षेत्रमा काम खोज्न चाहन्छन्। एक समीक्षा कार्यक्रम जुन तपाईं मूल्या can्कन गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईं यो रोजगार स्थिति पहुँच गर्न चाहानुहुन्छ भने, मध्य श्रेणी प्रशिक्षण चक्र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा विशिष्ट। यस चक्र को उपयोग गर्न, पहिले, विद्यार्थीको अध्ययन पूरा गरेको हुनुपर्दछ अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा र पाठ्यक्रम vitae मा सम्बन्धित शीर्षक, वा अर्को बराबर प्रमाणित।
यी अध्ययनहरु २००० अध्यापन घण्टाको अनुमानित अवधि छ जुन दुई शैक्षिक पाठ्यक्रमहरूमा संगठित छन्। यो प्रशिक्षण अवधि पूरा गरेपछि, विद्यार्थीसँग दक्षता र सीपहरू हुन्छन् जुन उनीहरूले अफिसमा यस कामको कार्यहरू पूरा गर्न आवश्यक छ।
प्रशासनिक सहायकको रूपमा काम गर्न तपाईलाई सहयोग पुर्‍याउन हाल प्रशिक्षण कोर्सहरूको विस्तृत दायरा फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
प्रशासनिक सहायक प्रतियोगिताको लागि कति विषयहरू अध्ययन गर्नुपर्दछ
प्राय: जसो आउँदो परीक्षामा भाग लिने अवसरको कदर गर्नेहरूले गर्ने प्रश्नहरू मध्ये यो एक हो। यस्तो अवस्थामा तपाईले पाठ्यक्रमहरू अध्ययन गर्नुपर्नेछ र राम्रो स्कोर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पाठ्यक्रम को सामग्री धेरै मुख्य अवधारणाको वरिपरि संरचित छन्। एकातिर, प्रशासनिक, वित्तीय र संवैधानिक कानून। सार्वजनिक समारोह, कार्यालय स्वचालन, स्थानीय व्यवस्था र सार्वजनिक कार्यालयहरूको संगठन सर्तहरू हुन् जुन परीक्षाको सामग्रीमा पनि सान्दर्भिक ठाउँ ओगटेका छन्। परीक्षण लिनको लागि तपाईले कलका आधारहरू ध्यानपूर्वक पढ्नु पर्छ।
सामान्यतया, यो कलमा भनिन्छ जहाँ एजेन्डा सम्बन्धी जानकारी देखा पर्दछ। एजेन्डा बिभिन्न मोड्युलमा संरचित छ। उदाहरण को लागी, हाल, राज्य प्रशासनिक सहायक विपक्षीको एजेन्डा दुई मुख्य ब्लक र समूह २ 27 शीर्षकमा संगठित छ.
यद्यपि यो जानकारीको एक अंश हो जुन केही समयमा परिवर्तन हुन सक्दछ, किनकि त्यहाँ कुनै एकल अधिवेशन प्राधिकरण छैन जसले प्रशासनिक सहायकहरूको लागि ठाउँ घोषणा गर्दछ। यस प्रश्नको सम्बन्धमा सम्भव भिन्नताहरू, साथै निश्चित मितिबाट केहि अपडेटहरू हुन सक्छन्। एकेडेमीको सहयोगमा विपक्षी तयार पार्नुको एक लाभ यो छ कि प्रशिक्षण केन्द्रका पेशेवरहरूले यस वा अन्य मुद्दाको बारेमा कुनै प्रश्नहरू समाधान गर्दछन्।
यो बिर्सनु हुँदैन कि त्यहाँ कुनै एकल प्रशासन छैन। विपक्षीलाई सामान्य राज्य प्रशासन, स्वायत्त प्रशासन र स्थानीय प्रशासनको दायराभित्र नै बनाउन सकिन्छ। यस तरीकाबाट, यदि तपाईं आफ्नो व्यावसायिक क्यारियरमा सहायकको रूपमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं कलहरूमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ जुन प्रत्येक क्षेत्रमा गरिन्छ। कार्यहरू जुन यस प्रोफाइलले प्रत्येक केसमा गर्दछ प्रत्येक प्रकारको प्रशासनमा फरक हुन सक्छ। जहाँसम्म, अहिले सम्म सूचीबद्ध कार्यहरू सबै केसहरूमा बारम्बार हुन्छन्। ती सबैमा थपिएको छ, साथै, जनताको ध्यान जुन एउटा कार्यालयमा आवश्यक कार्य हो जुन प्रत्येक दिन अघिल्लो भन्दा फरक छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » विपक्षहरू » प्रशासन द्वारा » प्रशासकीय सहायकको कर्तव्य
नमस्ते कारमेन, राम्रो जानकारी ... .. तर के तपाईं प्रशासनिक र प्रशासनिक सहायक बीचको भिन्नता वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ यदि त्यहाँ एक छ भने? र प्रशासनिक प्राविधिक के हो?
साथै, कृपया तपाइँ प्रशासनिक वा प्रशासनिक सहायक बन्न के गर्नु पर्छ?
धेरै धेरै धन्यवाद र अभिवादन
कुकिता बक्सर भन्यो
oiiee म अधिक जानकारी चाहन्छु
कुकिता बक्सियाडोरालाई जवाफ दिनुहोस्
पुरुष प्रजनन प्रणाली मानसिक रूपमा पढ्नेको लागि
EL TolaZZo लाई जवाफ दिनुहोस्
शुभ रात्री भनेको यो हो कि म धेरै चिन्तित छु म सोच्दिन सोच्दै छु कि म अध्ययन गर्न लागिरहेको छु र प्रशासकीय सहायक पढ्नु पर्छ कि भनेर जान्नु पर्छ तपाईलाई गणित जान्नु आवश्यक छ किनकि यसले मलाई डराउँछ किनभने म त्यो सबै बिर्सन्छु। मलाई स्नातक भएको एक बर्षमा मलाई समातिन्छ, कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस्
Yorjelis लाई जवाफ दिनुहोस्
केही राम्रो स्लटहरू छन्, अनुचित र निष्पक्ष मालिकहरूको साथ राख्नका लागि, जसले तपाईंलाई उनीहरूका लागि उनीहरूको कामका लागि लाने प्रयास गर्दछ, र सहायकको रूपमा संकलन गर्दछ।
स्टोकिज्म भनेको के हो?